नम्र राजा - भगवान स्विट्जरल्याण्ड को विश्वव्यापी चर्च
मिडिया > जर्नल उत्तराधिकार > पत्रिका उत्तराधिकारी 2014-04 > विनम्र राजा
एकछिन रोक्नुहोस् र यसको बारेमा सोच्नुहोस्। सूर्य, चन्द्र, ताराहरू, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्ने सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ताले आफूलाई आफ्नो शक्ति र सौन्दर्यबाट छुटकारा दिनुभयो र मासु र रगतको मानव बन्नुभयो। यद्यपि उनी बुढो मान्छे भएनन्, तर एक असहाय बच्चा जो पूर्ण रूपमा आफ्ना बाबुआमामा निर्भर थियो। उसले यो तपाईं र मेरो प्रेमको लागि गर्‍यो। हाम्रा प्रभु, सबै मिसनरीहरू मध्ये सबैभन्दा महान, स्वर्गको सुन्दरताहरू राख्नुभयो जसले हामीलाई पृथ्वीमा भएको शुभ समाचारको गवाही दिनको लागि मुक्ति र पश्चातापको योजनालाई पूर्ण रूपले ढाकछोप गर्नुभयो। बाबुले मन पराउने छोराले बेथलेहेमको सानो शहरमा बच्चाको रूपमा जन्मेपछि स्वर्गका सम्पत्तिहरूलाई तुच्छ ठान्थे र आफूलाई नम्र तुल्याउँथे। तपाईंलाई लाग्छ कि भगवानले आफ्नै जन्मको लागि महल वा सभ्यताको केन्द्र छान्नुभएको छ, हैन? त्यस समयमा बेथलेहेम न त दरबारहरूले सजाइएको थियो न त सभ्य विश्वको केन्द्र। यो राजनीतिक र सामाजिक हिसाबले एकदम महत्वपुर्ण थियो।
तर मीका 5,1: १ को भविष्यवाणी यसो भन्छ: “अनि तिमी, बेतलेहेम एफ्राटा, जो यहूदाका सहरहरूमध्ये थोरै पनि थियौ, मसँग भेट गर्न आयौ। जो इस्राएलमा प्रभु हुनुहुन्छ, जसको नतीजा शुरुदेखि अनन्तसम्म थियो। "।
परमेश्वरको बच्चा गाउँमा थिएन, तर गोठमा पनि जन्मेको थियो। धेरै विद्वानहरु का लागी विश्वास छ कि यो खलिहान सम्भवतः एउटा सानो पछाडिको कोठा थियो जसमा गाईवस्तुको आवाजको गन्ध र आवाज आउँछ। त्यसोभए, उहाँ पृथ्वीमा पहिलो पटक देखा पर्दा पनि परमेश्वर कुनै दिक्क लाग्नुभएको थिएन। तुरहीको आवाजले राजाको घोषणामा भेडा र गधालाई चिच्याईन्छ।
यी नम्र राजा तुच्छ हुर्किए र आफैमा कहिल्यै प्रसिद्धि र महिमा लिएनन्, तर सधैं बाबुलाई भने। यो केवल यूहन्नाको सुसमाचारको बाह्रौं अध्यायमा मात्रै उनले भने कि पूजा गर्ने समय आइसकेको छ र ऊ यरूशलेमको गधामा सवार थियो। येशू को हुनुहुन्छ भनेर चिनिन्छ: राजाहरूका राजा। भविष्यवाणी पूरा हुनेबित्तिकै पामका हाँगाहरू फैलिए। यो होसाना हुन गइरहेको छ! गाए र ऊ बहेको मानेको साथ सेतो घोडामा सवार हुँदैन, तर गधामा पनि पूर्ण रूपमा हुर्किएको छैन। ऊ एउटा गधाको बथानमा भएको खुट्टामा शहरमा सवार छ।
फिलिप्पी २: ले आफ्नो अन्तिम अपमानको कुरा गर्दछ:
"उनले आफूलाई नम्र तुल्याए र क्रूसमा मृत्युको लागि आज्ञा पालन गर्दै थिए।" उसले पापलाई जित्यो, रोमी साम्राज्यलाई होइन। इस्रायलीहरूले मसीहको अपेक्षालाई येशू पूरा गर्नुभएन। धेरैले आशा गरे जस्तै तिनी रोमी साम्राज्यलाई हराउन आएनन् न त तिनी पार्थिव राज्य स्थापना गर्न र आफ्ना जनहरूलाई उच्च पार्न आएका थिए। ऊ एउटा बच्चाको रूपमा अस्पष्ट शहरमा जन्मेको थियो र बिरामी र पापीहरूसँग बसेको थियो। उनले स्पॉटलाइटमा हुनबाट जोगिन। उसले यरूशलेममा एउटा गधा चढाए। यद्यपि स्वर्ग उसको सिंहासन थियो र पृथ्वी उसको मल थियो, उहाँ उठ्नुभएन किनभने उहाँको एकमात्र प्रेरणा तपाईं र मप्रतिको प्रेम हो।
हामी पहिले नै उनको फिर्तीको लागि उत्सुक छौं, जुन, तथापि, एक असंगत सानो गाउँमा हुने छैन, तर सबै मानवजातिलाई सम्मान, शक्ति र महिमामा देखिने छ। यस पटक उनी सेतो घोडामा सवार हुनेछन् र मानिस र सबै सृष्टिमाथि उसको सही शासन लिनेछन्।
टिम मागुइरे द्वारा